12 နှစ် အရွယ် ကလေးမလေးကို မုဒိမ်းကျင့်ပြီးနောက် လွမ်းတယ်ဆိုပြီး ရည်းစားစာရေးပို့ခဲ့တဲ့ 61 နှစ်အရွယ်အဘိုးအို – Na Pann San
အ င်ဒိုနီး ရှားနိုင်ငံက အသက်6 1နှစ်အ ရွယ်အဘိုးအိုတ စ်ယောက်ဟာ 12နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးကို ပိုးပန်းဖို့အတွက်ရ ည်းစားစာရေးပို့ရင်း ရဲအရာရှိများ ကဖမ်းဖိြု့ ကိုးစားခဲ့ချိန်မှာတော့ သူ၏အစီအစဉ် များအားလုံးပျက် ဆီးသွားခဲ့ရပါတယ် ။ ရည်းစားစာထဲမှ ကလေးမလေးရဲ့နာမ ည်အရင်းကိုတော့ ဖော်ပြထားခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ရည်းစားစာမှာတော့
“အခုထိ စိတ်ဆိုးနေသေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်စရာမိန်းကလေး…….. ၊ ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကို ဖမ်းဆီးဆွဲဆော င်းထားနိုင်သူလေး….. ၊ ကိုယ့်ကို အကူအညီမဲ့အောင်လုပ်ထားသူလေး ၊ ကိုယ်ဒီစာကို ရေးနေတဲ့ချိန်မှာ ကိုယ်မင်းကိုလွမ်းနေတယ် ” ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့ပါတယ် ။ ပိုပြီးစက် ဆုပ်စေခဲ့တာကတော့ အဘိုးအိုဟာ ကလေးမလေးကို ပိုးပန်းရုံသာမဟုတ်ပါဘူး. ၊
သူ၏တဏှာ စိတ်ကိုကျေနပ်မှုပေးစေနိုင်ရ န်အတွက် ရည်ရွယ်ထားတာကို လည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် ။ ရဲအရာရှိများ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ အဘိုးအိုဟာ ကလေးမလေးကို ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ 2019 က သားမယားပြုကျင့် ခဲ့ပေမဲ့လည်း ကလေးမလေးကေ တာ့နှုတ်ပိတ်နေခဲ့ပါတယ် ။ သို့သော်လည်းပဲ August လမှာတော့ အဘိုးအိုဟာ ကလေးမလေးကိုပြန်ပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက်ေ စ်ာကားခဲ့ပါတယ် ။
ရည်းစားစာထဲမှာ ကိုယ့်ကို ” Alfa Romeo ” ဆိုပြီးရေးသားထားတဲ့ အဘိုးအိုဟာ ကလေးမလေးကို ရည်းစားစာအများအပြားရေးပို့ခဲ့ပါတယ် ။ ထို့အပြင် အဘိုးအိုဟာ တစ်ကိုယ်တည်းသမားမဟုတ်သည့်အပြင် သူနှင့်အသက်တစ်ရွယ်တည်းဇနီးဖြစ်သူနှင့် အတူနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း နှင့် ယခုနေထိုင်နေသော နေအိမ်ကိုလည်းငှါးရမ်းထားတာဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။
ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ အဆိုပါရည်းစားစာကို ကလေးမလေး၏ဖခင်ရှာတွေ့ခဲ့ချိန်မှာတော့ အဆိုပါအဘိုးအို၏ မတရားသောပြစ်မှုများ ဘူးပေါ်သလိုပေါ်သွားခဲ့ပါတော့တယ် ။ ဖခင်ဖြစ်သူ၏ပြောပြချက်အရ အဆိုပါရည်းစားစာဟာ အမှန်တကယ်ချစ်ဖူးတဲ့သူ၏ အရေးအသားနှင့်တူနေကြောင်းလည်း ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ် ။
ကလေးမလေးဟာ သူမ၏မိဘများကို ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် အားလုံးပြောပြခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့ August 19 ရက်နေ့မှာ ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားခဲ့ကြပါတယ် ။ အဘိုးအိုကို ဖမ်းဆီးပြီး စစ်ဆေးခဲ့ချိန်မှာတော့ အခြားသော ကလေးမလေးတွေကိုလည်း ၎င်းနည်းလမ်း အတိုင်း ချဉ်ကပ်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ရဲအရာရှိများက ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ကလေးမလေးမှာတော့ စိတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောကြောင့် ရောဂါကုထုံးများဖြင့် ကုသမှုခံယူနေလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ် ။ ထို့အပြင် သူမ၏ကိစ္စဟာ အတော်လေးကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် ကျောင်းကိုလည်းမသွားတော့ဘဲ အိမ်အပြင်ကိုလည်း လုံးဝမထွက်တော့ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။
လးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် ……(Mckzone Daily)
ကင်ဂျုံအမ် သေဆုံးခဲ့သော် နန်းတက်မယ့်သူ ( သို့ ) မြောက်ကိုရီးယား ရဲ့ မျိုးဆက်သန့်စင် တဲ့ ပက်ခရု မျိုးဆက် နန်းလျာ ကို ရှာဖွေခြင်း
ရာသီဥတု ကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့ သဘာဝလွန် ဘေးအန္တရာယ် လက်နက် ကို တရုတ် ပိုင်ဆိုင်နေပြီလား…( တိုက်ဆိုင်မှုလား ဖန်တီးမှုလား )?
ဘင်္ဂါလီများ မြန်မြန် နှင့် ဘေးကင်းကင်းနေရပ်ပြန်နိုင်ခြင်း အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး ဟု အိန္ဒိယတိုက်တွန်း၊ တတိယနိုင်ငံတွေအနေ နဲ့ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး မျှဝေယူစေလိုဟု ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှပြော